PUBG Mobile အသစ် update သည်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်ငါးခုကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ ထိုစစ်ပွဲကြီးတွင်ပိုမိုအောင်မြင်ရန်လှည့်ကွက်ငါးခုဖြစ်လာသည်။
သင်ဟာကစားသမားတစ်ယောက်ထဲတစ်ယောက်တည်းကစားသမားတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ် PUBG Mobile မှာသူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူသွားလျှင်ဤအကြံပြုချက်ငါးချက်သည်တိုက်ခိုက်ရာတွင်အလွန်အကျိုးရှိသည်။
Android အတွက် Westworld ဂိမ်းကိုဇွန် ၂၁ ရက်တွင်စတင်မည်
နာမည်ကြီး Westworld စီးရီး၏ Android ဂိမ်းရောက်လာတော့မည်။ ၎င်းသည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းနှင့်လက်ဆောင်များကိုသင်မည်သို့ရနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်
ပိုကီမွန်သည်သူငယ်ချင်းများအပြန်အလှန်ဖလှယ်သည်။ နည်းပြမိတ်ဆွေများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည် Niantic ရဲ့ဂိမ်းလာမယ့်အပြောင်းအလဲများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်များက Miramar မြေပုံအသစ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် PUBG Mobile သည်လူပုဂ္ဂိုလ်ပုံစံနှင့်ပိုမိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုရရှိခဲ့သည်။
Stickman Soccer 2018 နှင့်အတူဘောလုံးကမ္ဘာ့ဖလားကစားပါ
Stickman Soccer 2018 ဟုခေါ်သောနောက်ဆက်တွဲသည်ကမ္ဘာ့ဖလားကိုကြည့်နေစဉ်အလျင်အမြန်ကစားနိုင်သည့် Arcade ဘောလုံးပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
Jurassic Hopper၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး« Jurassic »ala Crossy လမ်း
ဒိုင်နိုဆောများသည်သင်၏အရာဖြစ်ပါက Jurassic Hopper ဖြင့်သင့်ဘဝကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ရန်စောင့်ဆိုင်းရလိမ့်မည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးဂိမ်းငါးခု ဒီနေ့စတိုး Play Store တွင်ရနိုင်သောဂေါက်သီးဂိမ်းအမျိုးအစားကိုရှာဖွေပါ။
ARK ကို Download လုပ်ပါ။ Survival Evolved Android အတွက်ယခု
ARK: Survival Evolved အတွက် Android အတွက်ယခုအချိန်တွင် download ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးထုတ်ကုန်များစွာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်
ရဲကိုနှိမ်ရန် PAKO2ရှိဓာတ်ငွေ့ကိုနှိပ်ပါ
PAKO2သည်သင့်အားကားမြောက်မြားစွာဖြင့်လိုက်နေသောရဲမှလွတ်မြောက်ရန်သင့်ကိုဘီးနောက်ကွယ်တွင်ချထားသည်။ အလွန်ကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်အဆင့်မှာလုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းတစ်ခု။
Birdy Trip, ဒါမှမဟုတ်ပိုကောင်းလာတဲ့အခါ Flappy Bird ဘာလဲ
Birdy Trip သည် Casual ဟုခေါ်သောဂိမ်းတွင်အပြည့်အ ၀ စွဲမြဲနေသည့်အရည်အသွေးမြင့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျကောင်းတစ် ဦး ငှက်ကိုဒုက္ခထဲကရဖို့ကူညီရပါလိမ့်မယ်။
ယခုသီတင်းပတ်တွင်ပျော်မွေ့ရန် Android ဂိမ်းများ
ယခုအပတ်တွင်ခံစားနိုင်မည့် Android ဂိမ်းလေးခု။ ဒီသီချင်းကိုပိုပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ကစားဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီဂိမ်းအမျိုးအစားကိုရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးစည်းချက်ဂိမ်းလေးခု။ ဤရစ်သမ်ဂိမ်းများကိုရှာဖွေပါ၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလူကြိုက်များလာသည်။
Asus ROG ဖုန်းတွင် 10GB memory ရှိသည်
Asus ၏ gamers များအတွက် terminal အသစ် ROG Phone သည် 10 GB RAM ဖြင့်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်တော့မည်ဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင် 8 GB ရှိခဲ့သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး The Walking Dead ဂိမ်းများ
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Walking Dead ဂိမ်းလေးမျိုး။ လူသိများတဲ့စီးရီးပေါ်အခြေခံပြီးဒီဂိမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Dragon Ball ဂိမ်းလေးမျိုး။ Play Store ရှိ Saga ဂိမ်းအများစုနှင့်ဤရွေးချယ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
PC တွင် Android ဂိမ်းကစားခြင်းကိုခွင့်ပြုမည့် application တစ်ခုကို MSI မှစတင်မည်
ဂိမ်းစက်များထုတ်လုပ်သူသည် MSI Player အက်ပလီကေးရှင်းကိုတင်ပြပြီး၎င်းတွင်ကျွန်တော်တို့ကို OC တွင် Android ကစားနည်းများကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်
ဒါက Gameloft မှ Asphalt9ပုံပဲ
Gameloft သည် YouTube ပေါ်တွင် Asphalt 9: Legends ၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် Asphalt 8 ၏ဆက်ခံသူဖြစ်ကာ Play Store မှတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်စမ်းသပ်နေပြီးဖြစ်သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းငါးခု - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၂၀၁၁ Play Store တွင်မကြာသေးမီကမှရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Batman ဂိမ်းများ
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Batman ဂိမ်းလေးမျိုး။ ဒီ DC Comics မှ Bat Man ကိုသရုပ်ဆောင်ထားသောဤရွေးချယ်မှုများကိုရှာဖွေပါ။
Minecraft မှလှုံ့ဆော်ပေးသော Android ဂိမ်းများ
Minecraft စတိုင်မှုတ်သွင်းထားသော Android ဂိမ်း ၄ ခု။ လူကြိုက်များသောဂိမ်း၊ အထူးသဖြင့်ဂရပ်ဖစ်စတိုင်များမှုတ်သွင်းထားသောဤဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
PUBG developer များသည် Epic Games (Fornite) အား plagiarism အတွက်တရားစွဲဆိုသည်
PUBG ၏ကိုရီးယား developer သည် Epic Games ဆော့ဖ်ဝဲကိုဂိမ်း၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဗြောင်ကျကျကူးယူခြင်းအတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Pinball ဂိမ်းများ
Android အတွက်အကောင်းဆုံး pinball ဂိမ်းလေးခု။ ဤရွေးချယ်မှုကိုလူအများနှစ်သက်သောအမျိုးအစားများတွင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Sudoku ဂိမ်းများ
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Sudoku ဂိမ်းလေးမျိုး။ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားအောင်မြင်မှုရရှိသောကျော်ကြားသောဂျပန်ဂိမ်း၏အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်များအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Jurassic World Alive: ယခု Android အတွက်ဒိုင်နိုဆောများ၏ပိုကီမွန် GO
Jurassic World Alive ကို Android အတွက်ရရှိပြီဖြစ်သည်။ ဇွန်လတွင်ရုပ်ရှင်ရုံများသို့ ၀ င်ရောက်မည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်၏ Premiere မတိုင်မီရောက်ရှိလာသည့်စီးရီးမှဂိမ်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။ ဒီဂိမ်းကိုဒိုင်နိုဆောများနှင့်အတူပိုကီမုန်း GO အဖြစ်ဖော်ပြနေသည်။
Dragon Ball Legends ကို Play Store တွင်ရရှိနိုင်သည်
ယခုအခါသင်သည် Dragon Ball Legends ကို Play Store မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ဂျပန်ဇာတ်လမ်းတွဲမှ Android ထုတ်ကုန်များသို့ရေပန်းစားသည့်ဂိမ်းရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးရေခဲပြင်ဟော်ကီလေးခု။ Play Store မှသင်ယခုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောဤအားကစားဂိမ်း၏ဤရွေးချယ်မှုကိုရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးကာတွန်းဂိမ်းလေးခု။ Android အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းအမျိုးအစားများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Dragon Ball Legends ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းပြီးပြီ
Play Store တွင် Dragon Ball Legends အတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားပါသည်။ Android ဖုန်းများအတွက်မကြာမီဂိမ်းအတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းဖွင့်ခြင်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးစွန့်စားမှုဂိမ်းငါးခု။ ဒီ Android စွန့်စားခန်းဂိမ်းကိုကျွန်တော်တို့ Android ဖုန်းသို့ကူးယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သောအသုံးအရှိဆုံး Android ဂိမ်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ
Android မှာလုံးဝအသုံးမကျတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းငါးခု အသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးမ ၀ င်သောဤအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
သငျသညျရှာတှေ့နိုငျသော Candy Crush နှင့်ပတ်သက်။ အကောင်းဆုံးသိချင်စိတ်။ အသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ဂိမ်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်အလက်များရှာဖွေပါ။
Nintendo ၏မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများအတွက်ပထမဆုံးဂိမ်းဖြစ်သည့် Miitomo သည်မျက်မမြင်ကိုလျော့နည်းစေသည်
Nintendo ၏ပထမဆုံးမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများ၊ Miitomo သည်ဆာဗာများကိုအမြဲတမ်းပိတ်ထားပြီးနောက်အလုပ်လုပ်သည်ကိုရပ်နားလိုက်သည်။
Monument Valley ကို ၇ ရက်သာအခမဲ့ download လုပ်ပါ။
Google Play Store မှတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အကန့်အသတ်ရှိသောကမ်းလှမ်းမှုကြောင့် Monument Valley ကိုခုနစ်ရက်သာအခမဲ့ download ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဂူဂဲလ် Play Awards ၂၀၁၈ - အနိုင်ရရှိသည့်ဂိမ်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများထုတ်ဖော်ပြသသည်
၂၀၁၈ Google Play Awards မှအနိုင်ရရှိသူများကထုတ်ဖော်ပြသသည်။ ထိုဆုများ၏မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ဂိမ်းများပေါ်ထွက်လာသည်ကိုလေ့လာပါ။
Google Daydream အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းများ
Google Daydream အတွက်ထိပ်ဆုံးလေးခုကိုလက်ရှိရရှိနိုင် ဂူဂဲလ် virtual reality နှင့်သုံးစွဲသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောဂိမ်းများကိုဒီသီချင်းမှာပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးပိုကုန်းဂိမ်းလေးခု။ Android ဖုန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသောလူကြိုက်များသည့် Saga အတွင်း၌ဤရွေးချယ်မှုများကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးရေအားကစားဂိမ်းလေးခု။ ယခုလက်ရှိ Android အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး 3D ဂိမ်းများ
Android အတွက်အကောင်းဆုံး 3D ဂိမ်းလေးမျိုး။ Play Store တွင်လက်ရှိရရှိနိုင်သော 3D ဂိမ်းအမျိုးအစားများကိုရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး GTA ကဲ့သို့ဂိမ်းများ
Android မှာရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး GTA ကဲ့သို့ဂိမ်းလေးမျိုး။ ကျွန်ုပ်တို့ Android ဖုန်းသို့ download လုပ်နိုင်သော GTA ပုံစံဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဟက်ကာလေးလုံး ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ့်အတွေ့အကြုံရှိစေမည့်ဟက္ကာဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ Play Store တွင်ရနိုင်သည်။
PUBG သည်လူပုဂ္ဂိုလ်အသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည် [ဗွီဒီယို]
နောက်ထပ် Battle Royal PUBG ၏ update ကကျွန်ုပ်တို့အားလူပုဂ္ဂိုလ်အသစ်၌ဂိမ်း mode အသစ်ကိုခံစားခွင့်ရစေလိမ့်မည်။
ဟယ်ရီပေါ်တာ - Hogwars Mystery ကို Play Store တွင်ရနိုင်သည်
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Harry Potter: Hogwarts Mystery ကို Play Store တွင်အခမဲ့ဗားရှင်းတွင် download ရယူနိုင်သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးကဒ်ဂိမ်းလေးမျိုးကိုယနေ့ရရှိနိုင်သည်။ ယခုလက်ရှိ Android အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ကဒ်ဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကာတွန်းထဲ၌လုံးဝပကတိနည်းလမ်းဖြင့်ကစားတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်တစ် ဦး ထက်ပိုသောအိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်တော့မည်။
အရွယ်မရောက်သေးသူများအတွက် Android ဂိမ်းများကိုအကြံပြုသည်
အရွယ်မရောက်သေးသူများအတွက်မ Android ဂိမ်း4။ အရွယ်မရောက်သေးသူများအတွက်မထောက်ခံသည့် PEGI 18 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော Android ဂိမ်းအမျိုးအစားကိုရှာဖွေပါ။
Android ဖုန်းများအတွက်ကိုက်ညီသောဂိမ်းခလုတ်များ။ console များပေါ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးယခု Android တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းအမျိုးအစားများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲ Android ဂိမ်းများ
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲ Android ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်း ၅ ခု။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမလိုအပ်သော Android ဖုန်းများအတွက်ဤရွေးချယ်မှုများကိုရှာဖွေပါ။
Android Excellence - ဂူဂဲလ်၏အဆိုအရအကောင်းဆုံးအက်ပ်များနှင့်ဂိမ်း ၂၄ ခု
Android Excellence - Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းနှင့် application ၂၄ ခု။ Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းများနှင့် application များကိုယခုနှစ်တွင်ရွေးချယ်ထားသောဂူဂဲလ်မှစီစဉ်သောစာရင်းကိုရှာဖွေပါ။
Harry Potter: Hogwarts Mystery သည်toပြီ ၂၅ ရက်တွင် Android သို့ရောက်ရှိလာသည်။ Android တွင်ရက်သတ္တပတ်သုံးပတ်အကြာရေပန်းစားသောမှော်ဆရာတို့၏ Saga ဂိမ်းကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Android အတွက် ၂၅ MB အောက်အကောင်းဆုံးကစားနည်းများ
Android အတွက် ၂၅ MB အောက်အကောင်းဆုံးကစားနည်းများ သေးငယ်သောအလေးချိန် ရှိ၍ လွယ်ကူစွာဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်သည့်အပေါ့စားဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
Harry Potter: Hogwarts Mystery ၏ beta ကိုယခုသင် download လုပ်နိုင်သည်
ဟယ်ရီပေါ်တာ၏ပထမဆုံး beta: Hogwarts Mystery ကိုစမ်းသပ်ကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဒဏ္myာရီဆန်သောဂိမ်း၏ယခုအချိန်တွင်မည်မျှကောင်းပုံရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပထမဆုံးစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုသည့် beta ဖြစ်သည်။
Android အတွက်ထူးဆန်းတဲ့ဂိမ်း ၃ ခု။ သင်၏ Android ဖုန်းသို့သင်အလွယ်တကူဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အလွန်မူရင်းဂိမ်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါလိုက်တယ်ဂိမ်းများ! ရှိပြီးသား။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းခြေဂိမ်းလေးခု။ ဒီရွေးချယ်မှုကို Android အတွက်ကမ်းခြေဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။ ၎င်းတို့အားလုံးကို Play Store တွင်ယခု download လုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ PUBG Minecrafrt အတွေ့အကြုံကိုကြီးမားသောစတုရန်းမိုင်ခေါင်းများ၊ ကုဗများနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်နှစ်သက်သော pixelated style များဖြင့်ဇာတ်ကောင်များနှင့်အတူဆင်တူနေဆဲဖြစ်သော Hilarious ဂိမ်းသည်အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။
My Tamagotchi Forever၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင် Tamagotchi ကိုသင်၏ Android ထဲတွင်
My Tamagotchi Forever သည် Bandai Namco ၏ Android အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူကြိုက်များသော virtual အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးဖွားခြင်း၏နှစ် ၂၀ မြောက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပသော Android အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းစနစ်ဖြစ်သည်။
Google Play Instant သည်သင်အားဒေါင်းလုပ်မလုပ်မီဂိမ်းတစ်ခုကိုစမ်းသပ်ခွင့်ပြုသည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်ပြုလုပ်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်တင်ထားသောဂူဂဲလ်ပဏာမခြေလှမ်းသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးတင်းနစ်ဂိမ်းလေးခု။ Play Store မှရရှိနိုင်သောဤအားကစား၏အကောင်းဆုံးဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ဒါဆိုရင် Android အတွက်အကောင်းဆုံးတင်းနစ်ကစားနည်းတွေရှိမှာပါ။
သူက Google Play Store, Androidun မှာထိုးနှက်နေသော Playerunknown's Battlegrounds ၏ apk ကိုသင်ပျော်မွေ့နိုင်ရန်အတွက်သင့်အား Google Play Store, သင်လိုအပ်သည့်အရာများနှင့်ထည့်သွင်းခြင်းနည်းလမ်းမတိုင်မီသင့်အားထားခဲ့ပါမည်။ အားလုံးဂိမ်း mode ကိုအတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗားရှင်း enabled ။
Florence: Monument Valley ကိုဖန်တီးသူမှဂိမ်းအသစ်သည် Android သို့ရောက်လာသည်
Florence: Monument Valley ကိုဖန်တီးသူမှဂိမ်းအသစ်ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ Ken Wong ၏စတိုင်ပြောင်းလဲခြင်းအသစ်ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဤဂရပ်ဖစ်အတွက်ထူးခြားသည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပုံပြင်တွင်ရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ထားသောအဖြစ်မှန်ဂိမ်းများ။ ဒီရွေးချယ်မှုကိုသင် Android ဖုန်းများအတွက်တိုးပွားလာသောအဖြစ်မှန်အမျိုးအစားအတွင်းသင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
လူမှုရေးမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူ Android ဂိမ်း
မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်လူမှုရေးဝေဖန်မှုများနှင့်အတူ Android ဂိမ်းလေးခု။ သုံးစွဲသူများအားလူမှုရေးပြproblemsနာများကိုသတိပြုမိစေရန်ကြိုးစားသောဤဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Super Mario Run ကိုမတ်လ ၁၀ ရက်မှ ၂၅ ရက်အတွင်းတစ်ဝက်စျေးနှုန်းဖြင့်ရယူပါ
Super Mario Run ဂိမ်းကိုသိသိသာသာလျှော့စျေးပေးပြီးခြောက်လအကြာတွင် Nintendo သည်မတ်လ ၁၀ ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်းစျေးနှုန်းထက်ဝက်လျှော့ချခဲ့သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးပစ်ခတ်မှုဂိမ်းများ ယခုသင် Android ဖုန်းသို့ကူးယူနိုင်သည့်သေနတ်သမားဂိမ်းရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်စွန့်စားမှုဂိမ်းများ။ သင်၏ Android ဖုန်းတွင်ယခုသင်ကူးယူနိုင်သည့်ဤစွန့်စားမှုစွန့်စားမှုဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးမြင်းပြိုင်ပွဲများ။ ယခုဖုန်းကိုယခုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည့် Android အတွက်မြင်းပြိုင်ပွဲငါးခုရွေးချယ်ခြင်းကိုရှာဖွေပါ။
ဟယ်ရီပေါ်တာအတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း - Hogwarts Mystery ကိုယခုဖွင့်ထားသည်။ စီးရီးထဲမှာလူကြိုက်များတဲ့ဂိမ်း၏ pre- မှတ်ပုံတင်၏အဖွင့်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဂိမ်းများ
Android အတွက်အကောင်းဆုံးရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဂိမ်းများ။ ဤရွေးချယ်မှုကိုလက်ရှိရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး multiplayer ဂိမ်းများ။ ဒီရွေးချယ်မှုကို Android အတွက်ဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံ - Eastern Bloc 2၊ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော Silent Hill စတိုင်လ်ရှိထိတ်လန့်ဖွယ်ဂိမ်း
အကယ်၍ သင်သည် Android အတွက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသော Silent Hill ပုံစံဖြင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းများကိုနှစ်သက်ပါက Mental Hospital: Eastern Bloc2ကိုယခုမှ စ၍ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ။ ၎င်းကိုလုံးဝအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးအဆုံးမဲ့ပြေးပွဲလေးခု။ ယခုအမျိုးအစားအတွက်ရွေးချယ်ထားသောဂိမ်းအမျိုးအစားများကိုရှာဖွေပြီး Android ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်နိုင်သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှုဂိမ်းလေးမျိုး။ ဒီရွေးချယ်မှုကို Android ထုတ်ကုန်များအတွက်ဒီအမျိုးအစားထဲမှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဂိမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
Android မှာရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးယုတ္တိဗေဒဂိမ်းခြောက်ခု။ ဒီရွေးချယ်မှုကို Android မှာသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ logic အမျိုးအစားအတွင်းအကောင်းဆုံးဂိမ်းများနဲ့ရှာဖွေပါ။
[APK] သင်၏ Android တွင် emulators နှင့်ဂိမ်းများကိုမည်သို့အခမဲ့ရယူရမည်နည်း
လက်တွေ့လေ့ကျင့်ထားသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွင်သင်၏ Android terminal တွင် emulators နှင့်ဂိမ်းများကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်ပုံကိုပြသခဲ့သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး real-time နည်းဗျူဟာဂိမ်းများ
Android အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်နှင့်တပြေးညီမဟာဗျူဟာဂိမ်းများ။ ရရှိနိုင်သည့် ETR အမျိုးအစားအတွင်းမှဤရွေးချယ်မှုများအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Super Mario Run သည် download သန်း ၁၀၀ ကျော်သည်
Nintendo ၏ပထမဆုံးမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်သော Super Mario Run သည်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်ဒေါင်းလုပ်သန်း ၁၀၀ ကျော်သာလွန်သည်။
Android မှာအခက်ခဲဆုံးဂိမ်းသုံးခု။ ဤရွေးချယ်မှုကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလွယ်ကူစေမည့်ဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။ ဒါကြောင့်စိန်ခေါ်မှုအတွက်အဆင်သင့်ပါ။
Android မှာ Mario Kart အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများ
Android မှ Mario Kart အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာလေးခု။ Nintendo ဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုးနိုင်သောဤဂိမ်းလေးမျိုးကိုရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး retro ဂိမ်းများ
Android အတွက်အကောင်းဆုံး retro ဂိမ်းလေးခု။ ဒီရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကယနေ့ Android အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး retro ဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
မျှော်လင့်ထားသည့် Mario Kart Tour သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ (ကစားရန်အခမဲ့)
Nintendo တွင်ဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသောနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှာ Mario Kart Tour ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ကစားနိုင်ပြီး In-app ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်စျေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိလိုက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ခေါင်းစဉ်များပါဝင်သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးပဟေgamesိဂိမ်းငါးခု။ သင်၏ဗဟုသုတကိုစမ်းသပ်နိုင်မည့်ဤရွေးချယ်မှုများကိုရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းငါးခု။ ဒီရွေးချယ်မှုအကြောင်းကို Android အတွက်အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းများနဲ့ရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးလှေဂိမ်းလေးခု။ Android တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးလှေကစားနည်းများနှင့်ဤရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်စိတ်အပန်းဖြေဆုံးဂိမ်းလေးမျိုး။ ဒီရွေးချယ်မှုကို Android ထုတ်ကုန်များအတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြေလျှော့ဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်းရာသီအားကစားဂိမ်းများ။ သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးဆောင်းရာသီအားကစားဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများ။ ယခုရွေးချယ်မှုကို Android ထုတ်ကုန်များတွင်တွေ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး virtual reality ဂိမ်းများ
Android အတွက်အကောင်းဆုံး virtual reality ဂိမ်းလေးခု။ ဤရွေးချယ်မှုကိုယခု Android တွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
3 Sonic ဂိမ်းများသည်ပုဂ္ဂလိကကစားသမားအချက်အလက်များကိုပေါက်ကြားစေသည်
SEGA Sonic ဂိမ်းများသည်ကစားသူများ၏အချက်အလက်များကိုယိုစိမ့်စေသည်။ Google Play မှ SEGA ဂိမ်းများကိုထိခိုက်သောဤယိုစိမ့်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Harry Potter: Hogwarts Mystery ကို Google Play နှင့် APK တွင်ရနိုင်သည်
Harry Potter: Hogwarts Mystery ကို Google Play နှင့် APK တွင်ရနိုင်သည်။ နာမည်ကြီး Saga အပေါ်အခြေခံပြီး Android ဂိမ်းအသစ်စတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးပဟေgamesိဂိမ်း ၅ ခု။ ဤရွေးချယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော Androd အတွက်အကောင်းဆုံးပဟေgamesိဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ Android ဖုန်းတွင် download ပြုလုပ်နိုင်သည့်အလင်းရောင် ၅ မျိုး
Android အတွက်အလင်းဂိမ်း ၅ မျိုးရနိုင်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုကို Android ဖုန်းများအတွက်သင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအလင်းဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
သငျသညျလစျြလြူရှုနိုင်ကြောင်း Clash Royale ဆင်တူဂိမ်းများကို
Clash Royale နှင့်ဆင်တူသည့် Android ဂိမ်းများ။ လူကြိုက်များသော Clash Royale မှလှုံ့ဆော်ပေးသောဤ Android ဂိမ်းအမျိုးအစားများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Chess games5။ ဒီရွေးချယ်မှုကို Android မှာရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးစစ်တုရင်ကစားနည်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ဂိမ်းခြောက်ခု။ ယခုရွေးချယ်မှုကို Android အတွက်အကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးလယ်ယာဂိမ်းလေးမျိုး။ Android အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးခြံဂိမ်းများဖြင့်ဤရွေးချယ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Razer ဖုန်း၏ 120Hz မျက်နှာပြင်အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းများစာရင်း
အသစ်နှင့်အံ့မခန်းဖွယ် Razer ဖုန်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင် 120 Hz မျက်နှာပြင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဂိမ်းများစာရင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Android အတွက်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်ဂိမ်းလေးခု။ ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်ဂိမ်းများနှင့်ဤရွေးချယ်မှုကိုရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Solitaire ဂိမ်းလေးခု။ ဒီရွေးချယ်မှုကို Android တွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး solitaire ဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဘေ့စ်ဘောဂိမ်းလေးခု။ ဒီရွေးချယ်မှုကို Android အတွက်အကောင်းဆုံးဘေ့စ်ဘောဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Adventure Time ဂိမ်းငါးခု။ လူကြိုက်များတဲ့စီးရီးအပေါ်အခြေခံပြီးအကောင်းဆုံးဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Google Play Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေးဆောင်ရသောအခမဲ့ဂိမ်းစာရင်း။ ကမ်းလှမ်းချက်၏တရားဝင်မှု၏နေ့စွဲအားဖြင့် updated စာရင်း။
ပိုကီမွန် GO ခရစ္စမတ်ပွဲကိုစတင်ပြီးဖြစ်သည်
ပိုကီမွန် GO ခရစ္စမတ်ပွဲကိုစတင်ပြီးဖြစ်သည်။ စတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောလူကြိုက်များသော Niantic ဂိမ်း Christmas ပွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် Arkanoid စတိုင် 2017 !!
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော Arkanoid သည်ခေတ်သစ်နှင့်လက်ရှိစတိုင်နှင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးပြီးချိတ်ဆက်မည့်ဂိမ်းစနစ်တစ်ခုနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးထိတ်လန့်စရာဂိမ်းများ။ ဒီရွေးချယ်မှုကို Android မှာကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးထိတ်လန့်စရာဂိမ်းတွေနဲ့ရှာဖွေပါ။
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း Play Store တွင်အများဆုံးအကြောင်းကိုပြောခဲ့ကြသည့်ထိပ်ဆုံး ၂၅ ခုကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ယူလာပါမည်။ အချို့ပျောက်ဆုံးနေနိုင်သော်လည်း၊
တူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ Android platform ၇ ခု
7 Android အတွက်ပလက်ဖောင်းဂိမ်းများသည်၎င်းတို့အားတူညီသောပုံစံဖြင့်ဖြတ်တောက်ထားသော်လည်းအလွန်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းများဖြစ်ပြီးအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုလည်းမလိုအပ်ပါ။
Monster Ninja, သင်နှင့်ချိတ်ဆက်မည့်လက်ရှိနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းဂိမ်း
Android ဂိမ်းတွေအကြောင်းပြောရင်ဒီနေ့ငါနဲ့ချိတ်ဆက်မည့်ပလက်ဖောင်းဂိမ်း Monster Ninja ကိုငါအကြံပေးချင်တယ်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးရဲဂိမ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုကို Android အတွက်အကောင်းဆုံးရဲဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
ပိုကီမွန် Go ကိုပိုကီမွန်အသစ် ၅၀ နှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်အသစ်ပြုပြင်သည်
ပိုကီမွန် Go ကိုအသစ်သောပိုကီမွန်ပေါင်း ၅၀ ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ပိုကီမွန်ဂူးမွမ်းမံမှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုယူဆောင်ပေးသောသတင်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Captain Tsubasa: Dream Team၊ Oliver နှင့် Benji တို့၏ဂိမ်းများကို Android အတွက်ရနိုင်သည်
Captain Tsubasa: Dream Team: Oliver နှင့် Benji ဂိမ်းတို့သည် Android တွင်ယနေ့ရောက်ရှိလာသည်။ Android ပေါ်ရှိလူကြိုက်များသောစီးရီးအပေါ် အခြေခံ၍ ဂိမ်းရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးအော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းများ။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမလိုအပ်သော Android ဂိမ်းခြောက်ခုကိုရှာဖွေပါ။ ယခုသူတို့ကို download လုပ်ပါ။
PlayerUnknown's Battlegrounds သည် Android ဂိမ်းနှစ်ခုဖြင့်လာသည်
PlayerUnknown's Battlegrounds သည် Android ဂိမ်းနှစ်ခုဖြင့်လာသည်။ Android ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ဂိမ်းရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ MOBA ဂိမ်းများ။ ယခု download လုပ်ထားသော Android အတွက်အခမဲ့ MOBA ဂိမ်းရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤရွေ့ကား Google အဆိုအရ 2017 ၏အကောင်းဆုံး app များနှင့်ဂိမ်းများဖြစ်ကြသည်
ဤရွေ့ကား Google အဆိုအရ 2017 ၏အကောင်းဆုံး app များနှင့်ဂိမ်းများဖြစ်ကြသည်။ ဂူဂဲလ်ထင်သည့်နှစ်များထဲမှအကောင်းဆုံးဂိမ်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုရှာဖွေပါ။
ဂိမ်းသစ် Naruto x Boruto: Ninja Voltage ကိုကမ္ဘာအနှံ့တွင်ရနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဒီလုပ်ဆောင်ချက် RPG အကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်ပြောပြပါ။
Animal Crossing: Pocket Camp သည် (၆) ရက်အတွင်းဒေါင်းလုပ် ၁၅ သန်းရရှိခဲ့သည်
Animal Crossing - Pocket Camp သည်ခြောက်ရက်အတွင်း download ပေါင်း ၁၅ သန်းကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။ Nintendo ဂိမ်း၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
တီဗီစီးရီးအပေါ်အခြေခံပြီး Android ဂိမ်း 5
တီဗီစီးရီးအပေါ်အခြေခံပြီး Android ဂိမ်း5။ ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးများအပေါ် အခြေခံ၍ ဂိမ်းများဖြင့်ဤရွေးချယ်မှုကိုရှာဖွေပါ။
တစ်မိနစ်ထက်မနည်းသောဂိမ်းများဖြင့် Android သုံးဂိမ်းများ
တစ်မိနစ်တောင်မပြည့်သောဂိမ်းများနှင့် Android အတွက်ဂိမ်း ၃ ခု။ အလွန်လျင်မြန်စွာဖြစ်ခြင်းအတွက်ထွက်ပေါ်လာသောဤရွေးချယ်မှုများကိုရှာဖွေပါ။
ရုပ်ရှင်အပေါ်အခြေခံပြီး Android ဂိမ်းများ
ရုပ်ရှင်အပေါ်အခြေခံပြီး Android ဂိမ်းများ။ ဒီရွေးချယ်မှုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်အခြေခံပြီး Android ဂိမ်းများနဲ့ရှာဖွေပါ။
Black Friday သည် Google Play Store တွင်ဂိမ်း ၂၀ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်
သောကြာနေ့ (Black Friday) သည်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးသို့အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများအတွက်ရာနှင့်ချီသောကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အတူလာသည်။ လျှော့စျေးဂိမ်း ၂၀ စာရင်းဖြစ်သည်။
Android အတွက် Dragon Project - ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Android အတွက် Dragon Project - ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ Android အတွက်ယခုရရှိနိုင်သည့်ဒီဂိမ်းကစားသူနည်းဗျူဟာဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Marvel Strike Force သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Android သို့ရောက်ရှိလာသည်။ လာမည့်နှစ်တွင် Android သို့ RPG အသစ်အကြောင်းထပ်မံလေ့လာပါ။
တိရိစ္ဆာန်ဖြတ်ကူးခြင်း - Pocket Camp ကို Google Play စတိုးတွင်ရနိုင်သည်
Nintendo ၏ Animal Crossing ကိုတရားဝင်မဖွင့်ခင်တစ်ရက်အလိုတွင်ဂျပန်ကုမ္ပဏီသည် Play Store တွင်ဂိမ်းကိုစတင်လိုက်သည်
တိရိစ္ဆာန်ဖြတ်ကူး - အိတ်ဆောင်စခန်းလွှတ်ပေးသည့်နေ့ရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် ယခုအပတ်တွင် Android သို့ဂိမ်းရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သူငယ်ချင်းများနှင့်ပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများ
သူငယ်ချင်းများနှင့်ပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများ။ သူငယ်ချင်းများနှင့်ပျော်မွေ့ရန်ဤစံပြဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Sonic Forces: Speed ​​Battle ကို Android အတွက်ရနိုင်သည်
Sonic Forces: Speed ​​Battle ကို Android အတွက်ရနိုင်သည်။ ဂူးဂဲလ်ပလေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သော Sonic ဂိမ်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Lineage 2: Revolution ကို Android အတွက်ရရှိပြီ
Lineage 2: Android နှင့် iOS အတွက်ယခုတော်လှန်ရေးရရှိနိုင်ပါသည်။ Android ဖုန်းများအတွက်ယခုရရှိနိုင်တဲ့ဒီ MMORPG ဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Weave the Line - အစက်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းဂိမ်းကိုအသစ်တီထွင်သည်
Weave the Line - အစက်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းဂိမ်းကိုအသစ်တီထွင်သည်။ အစက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက်ရှုထောင့်အသစ်ကိုပေးသောဤဂိမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Football Manager Mobile 2018 ကို Android အတွက်ရနိုင်သည်
Football Manager Mobile 2018 ကို Android အတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သည့် SEGA ဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး DC Comics ဂိမ်းများ
Android အတွက်အကောင်းဆုံး DC Comics ဂိမ်းလေးခု။ ဒီရွေးချယ်မှုအကြောင်းကို Android ထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံး DC Comics ဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
Pro Evolution Soccer 2018 ကို Android အတွက်ရရှိပြီဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များသောဘောလုံးဂိမ်းတွင်အသစ်အဆန်းများကိုရှာဖွေပါ။
ဟယ်ရီပေါ်တာမှာလည်း Android အတွက်တိုးချဲ့ထားသောအဖြစ်မှန်ဂိမ်းရှိလိမ့်မည်
Niantic ဟာတိုးပွားလာတဲ့အဖြစ်မှန် Harry Potter ဂိမ်းကိုထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ လာမည့်နှစ်တွင်စတူဒီယိုဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသည့်ဂိမ်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Monument Valley2ကိုယခုအခါ Android အတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ
Monument Valley2ကို Android အတွက်ရရှိပြီဖြစ်သည်။ ယနေ့ရရှိနိုင်သည့်လူကြိုက်များသောမိုဘိုင်းဂိမ်းစတင်ခြင်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Marvel ဂိမ်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုကိုလက်ရှိ Android ဖုန်းများအတွက်ရရှိနိုင်သော Marvel Universe မှအကောင်းဆုံးဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
Super Mario Run ကိုအကြိမ်ပေါင်း ၂၀၀ မီလီယံဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းအောင်မြင်သော်လည်း၎င်းမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ Android အတွက်ရယ်စရာအကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝင်းဂိမ်းများ
ဤသည်အကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝင်းဂိမ်းများကိုငါတို့အဆိုပြုချက်ဖြစ်သည်။ ဖုတ်ကောင်များနှင့်နည်းလမ်းများစွာအတိုင်းပျော်စရာရှိသည်။ ဒီဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ သင်ပျင်းမည်မဟုတ်ပါ။
ပိုကီမွန် GO ဟယ်လိုဝင်းပွဲကိုယခုရရှိနိုင်သည်
ပိုကီမွန် Go ဟယ်လိုဝင်းပွဲကိုယခုရရှိနိုင်သည်။ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်မတိုင်မီအထိထိုအဖြစ်အပျက်၏သတင်းကိုခံစားရန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
ဒီတနင်္ဂနွေပျော်စရာရန် applications များနှင့်ဂိမ်းများ 5
အောက်တိုဘာတံတားပြီးဆုံးသွားသော်လည်း Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝခံစားမည့်ဤရွေးချယ်မှုများနှင့်ဂိမ်းများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အားပေးချင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အောက်တိုဘာလတွင်ပြုလုပ်မည့်တံတားကိုသင်စွန့်စားမှုများပြုလုပ်လိုပါက Android အတွက်အကောင်းဆုံးကားဂိမ်းအချို့ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်
အကယ်၍ သင်သည် Final Fantasy ဂိမ်း Saga ကိုနှစ်သက်သည်ဆိုလျှင်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်အချို့နှင့်အတူနမူနာသေးသေးလေးတစ်ခုယူဆောင်လာသည်။
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်တရုတ်မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်သူ၏မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် Honor of Kings ကစားခြင်းရက်ပေါင်းများစွာနေပြီးနောက်ခေတ္တမျက်စိကွယ်သွားသည်။
သင်၏ Android ဂိမ်းများ၏ဂိမ်းများကိုအလွယ်တကူမှတ်တမ်းတင်ရန်။ YouTube ကိုတည်းဖြတ်ရန်နှင့်တင်ရန် option နှင့်အတူတောင်မှ !!
သင်၏ YouTube ဂိမ်းကိုတည်းဖြတ်ရန်နှင့်တင်ရန်ရွေးချယ်ရန်နှင့်သင်၏ Android ဂိမ်းများ၏ဂိမ်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုပြသထားသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ။
တနင်္လာနေ့တွင်အကောင်းမြင်ဖြင့်ဖြန့်ချိမည့်ဂိမ်းနှင့် application ၅ ခု
Batman - Android အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့ရန်သူအတွင်းမှာ
Dark Knight သည် Android သို့ပြန်သွားသည်။ ယခုအခါ Batman: The Enemy အတွင်း၌ပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်အပျက်ကို Play Store တွင်အခမဲ့ရရှိနိုင်သည်
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Arcade ဂိမ်း ၁၆ မျိုးကိုရှာဖွေပါ။ အိပ်စက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပါ။
ဂိမ်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ် ၄ ခုသည်ရွှင်လန်းမှုနှင့်စတင်ပါ
Androidsis တွင်ရက်သတ္တပတ်သစ်နှင့်လအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ပါ။ ဤတနင်္လာနေ့ကိုသင်ပိုမိုနှစ်သက်စေရန်ဂိမ်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များကိုပေးမည်။
ဒီတနင်္ဂနွေကိုလက်လွတ်ဖို့မဂိမ်း3ဂိမ်း
တနင်္ဂနွေနေ့၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအသစ်သောလှုပ်ရှားမှုဂိမ်းများ၊ တိုက်ပွဲများနှင့်စွန့်စားမှုအသစ်များကိုစူးစမ်းပါ။ မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
OBB နည်းလမ်းဖြင့်ဂိမ်းများ၏ APKS ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာ obb method ကိုသုံးပြီး apks ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာပြသပေးတယ်၊ Into the Dead2APK နဲ့စမ်းသပ်ပြီးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်တယ်။
[APK] ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းများကိုကျော်။ Apk of the Dead2သို့ APK ကို download လုပ်ပါ။
ဤနေရာတွင်သင့်တွင် APK of Into the Dead2ရှိသည်။ သို့မှသာသင်၏ Google Play Store တွင်မရနိုင်မီသင်၏ Android တွင်တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
Into the Dead2ကို Google Play တွင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်
သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီ၊ The Dead2Into the first, zombie ရှင်သန်မှုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးပထမနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသတင်းများပါလာသည်။
မူရင်းထုတ်လုပ်ပြီးဆယ်စုနှစ်သုံးခုအကြာတွင် King's Knight သည် Android သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
အကယ်၍ မင်းကဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုစိတ်ထက်သန်နေလျှင်မင်းက King's Knight: Wrath of the Dark Dragon အသစ်ကို Play Store တွင်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်ကံကောင်းပါစေ။
သင်၏ Android သိုလှောင်မှုနေရာကိုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုတည်းနှင့်၎င်းတို့တွင်ရှိသည့်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်း ၁၀၀ ရှိလိုပါသလား။
အားလပ်ရက်များပြန်ရခြင်းကိုကျော်လွှားနိုင်ရန် Android ဂိမ်းများနှင့် application သစ်များ
အကယ်၍ သင်၏အားလပ်ရက်ကုန်ဆုံးမှုကြောင့်သင်စိတ်ဓာတ်ကျနေပါက Android အတွက်ဂိမ်းနှင့် application အသစ်များကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါ
Square Enix ကစမတ်ဖုန်းများအတွက် Final Fantasy XV: Pocket Edition ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Final Fantasy XV သည်၎င်း၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုထပ်မံတိုးချဲ့နေပြီး Final Fantasy XV: Pocket Edition ကို Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များနှင့် Windows 10 အတွက်မကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်သည့် Tekken ဂိမ်းသည်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မကြာမီလာတော့မည်
Tekken Mobile ကိုမကြာမီ Google Play Store နှင့် Apple App Store မှဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်သည့်ကာလကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Husqvarna စပိန်နှင့် La Vuelta တို့ဖြင့်ထူးကဲသောဆုများကိုရယူပါ
စပိန်၏စက်ဘီးစီးခရီးစဉ်အခါသမယတွင် Husqvarna Spain အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်ဆုများစွာကိုရရှိနိုင်သောပျော်စရာကောင်းသောအခမဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။
Dino Chrome, Google ဂိမ်းတစ်ခု
Dino Chrome သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများထဲမှလာသည်။ Google Chrome ၏ဒိုင်နိုဆောများ Play Play Store ဆက်သွယ်မှုဆုံးရှုံးသွားသောအခါ
နည်းဗျူဟာဂိမ်း Titanfall: Assault သည် Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်
Titanfall Assault သည် Titanfall နှင့်စကြာ ၀ inာတွင်တူညီသော Android နှင့် iOS အတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီမဟာဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်သည်။
အားလပ်ရက်ပျော်မွေ့ရန်ဂိမ်းများနှင့် application များ
Androidsis မှလျှောက်လွှာအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည်။ သင်သည်ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့သောနေ့ကိုသင်အနှစ်သက်ဆုံးနည်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုကြီးကျယ်တဲ့ Android ဂိမ်းတွေနဲ့ညှစ်ပါ
တနင်္ဂနွေနေ့များပြီးဆုံးပြီဆိုသည့်အချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသင့်အားနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်ဖျော်ဖြေမှုအရှိဆုံး Android ဂိမ်းအချို့ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းတိုတောင်းပေးပါမည်။
အားလပ်ရက်မှာအနားယူဖို့ကဒ်ဂိမ်း ၄ ခု
သင်ငြီးငွေ့။ ဂိမ်းအသစ်များကိုစမ်းသုံးကြည့်လိုပါကယနေ့အပျော်တမ်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သော Android အတွက်တီထွင်ဆန်းသစ်သောကဒ်ဂိမ်းလေးခုကိုကျွန်ုပ်အဆိုတင်သွင်းနေပါသလား။
အားလပ်ရက်တွင်ပျော်စရာအပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကယနေ့သင့်အားနောက်ဆုံးပေါ် Android ခေါင်းစဉ်ငါးခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်
Angry Birds2သည် Clans တို့၏ဒုတိယမြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Angry Birds2သည်၎င်း၏ဒုတိယမြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြီးပြီ။ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှပရိသတ်များနှင့်သင်ကစားနိုင်သည်
ယခုစနေ၊ တနင်္ဂနွေကုန်ပြီဖြစ်သောကြောင့် Android ထုတ်ကုန်များတွင်ဂိမ်းကစားရန်အချိန်တန်ပြီ။
သင့်တွင် NES emulator တစ်ခုရှိပါက NES ဂိမ်းများကိုအပြည့်အ ၀ လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့်မည်သို့ download လုပ်ရမည်ကိုသင်ကြားသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ကံကောင်းပါစေလိမ့်မည်။
လာမည့် Emoji The Movie, လူတိုင်းအတွက်ရယ်ရသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရုပ်ရှင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ...
ဂိမ်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခုသည်စိတ် ၀ င်စားမှုဖြင့်စတင်ပါ
စွမ်းအင်နှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်စတင်ရန် Android အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ဂိမ်းအသစ်များအားအဆိုပြုချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ပတ်အစပြုသည်
The Elder Scrolls: ဒဏ္,ာရီများ၊ ယခု Play Store တွင်ရနိုင်သည်
လများစွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်မတ်လတွင် PC နှင့်ဇွန်လတွင်တက်ဘလက်များတွင်ပွဲထုတ်ပြီးနောက်၊ Android စမတ်ဖုန်းများအတွက် Elder Scrolls: Legends ကိုရနိုင်သည်။
Androidsis တွင်ယနေ့သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းတွင်ကစားခြင်းကိုပျော်ရွှင်ရန်အကောင်းဆုံး PSP emulators အချို့ဖြင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးသည်။
Super Mario 1,2and 3, DonkeyKong, Street Fighter (သို့) Sonic တို့လိုအကောင်းဆုံး NES emulator ပေါင်း ၇ ခု၊
ရက်သတ္တပတ်သစ်တစ်ခုစတင်ပြီး Android ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများပြုလုပ်ရန်သင့်အားအပြည့်အဝအားပေးလိုပါသည်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေသစ်ကိုစတင်ပြီးမင်းကိုငြီးငွေ့စရာမဖြစ်စေရန် Android ဂိမ်းလေးခု၊ ပျော်စရာကောင်းပြီးစွဲလမ်းစေမည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည်။
ကောင်းမွန်သောနေ့လည်ခင်းအတွက်ပျော်စရာကောင်းသော Android ဂိမ်းများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက်သတ္တပတ်၏အလယ်တွင်ရှိနေသည်ဟူသောအချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးယနေ့ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းတစ်ခုအတွက်ပျော်စရာကောင်းသောဖျော်ဖြေမှုနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဆိုင်ရာ Android ဂိမ်းလေးမျိုးကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာသည်။
ဒီဂိမ်းနှင့် applications များနှင့်ပြည့်ဝ၏ရက်သတ္တပတ်ကိုစတင်ပါ
ရက်သတ္တပတ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ခြေထောက်မှာစတင်နိုင်ဖို့အတွက်မင်းတို့မသိနိုင်သေးပေမယ့်သင်ချစ်ရမယ့်အက်ပလီကေးရှင်းနဲ့ဂိမ်း ၅ မျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားပါတယ်။
Android အတွက် Nintendo DS emulators ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဂိမ်းကစားသူများထံမှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်သီဆိုသည်
တနင်္ဂနွေကိုအပြည့်အဝခံစားရန်ဂိမ်း ၁၂ ခု
ဒီတနင်္ဂနွေကိုသင်အပြည့်အဝခံစားနိုင်ဖို့ Androidsis မှာစွန့်စားခန်းဂိမ်းများ၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ စစ်ပွဲ၊
Minecraft: Play Store တွင် Story Mode Season2ကိုရနိုင်သည်
Telltale Games မှ Minecraft: Story Mode Season2ကိုယခုနှစ် Android အတွက်ရရှိနိုင်သည့်နှစ်၏မျှော်မှန်းထားသည့်ဒုတိယရာသီဖြစ်သည့် Story Mode Season XNUMX ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်။
လှပပြီးစွဲလမ်းစေသောကစားနည်းများ - ယနေ့ Rushfight ကစားနည်းကိုသတိထားပါ။
Androidsis ကဏ္ section အသစ်ကသင့်ကိုဒီလောက်အန္တရာယ်များတဲ့စွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းစေသောဂိမ်းကစားနည်းများကိုပုံမှန်သယ်ဆောင်သွားမှာပါ။
ယနေ့ကျင်းပရန်စွန့်စားခန်း4ခုသည်အင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်
ဒီနေ့ဟာတခြားနေ့တွေလိုနေ့မျိုးဖြစ်ပေမယ့် Androidsis မှာကျွန်တော်တို့ဟာမင်းကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့စွန့်စားမှုစွန့်စားမှုလေးမျိုးကိုတင်ပြချင်တယ်။
ဂိမ်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း (၅) ခုသည်တစ်ပတ် မှစတင်၍ အစပြုရန်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပတ်ကိုအပြုသဘောဖြင့်စတင်စေချင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းအသစ်များနှင့် application အသစ် ၅ ခုကိုယူဆောင်လာသည်
Pokemon Go သည် ၄ ​​င်း၏နှစ်ပတ်လည်နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင်အဖြစ်အပျက်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်
Pokemon Go ကိုစိတ်ထက်သန်သူတစ် ဦး လား။ ၎င်းသည်၎င်းကိုစတင်သည့်အချိန်မှတစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးယနေ့တွင်သင်နှစ်သက်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်သစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်
2017 ၏အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများ: ပထမပတ်ပတ်လည်
ယခုနှစ်လယ်ပိုင်းနှင့်အားလပ်ရက်များအလယ်တွင်၊ သင်အလောင်းအစားပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများ၏စာရင်းကိုမည်သို့တိုးတက်စေခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။
ဤတွင်နဂိုမဖြန့်ချိသေးသောဗားရှင်း (သို့) အတည်မပြုရသေးသောဗားရှင်းတွင်ရှိနေသေးသည့်တိုင်သင်၏ Android ကိုမစမ်းသင့်သော၊
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ Flippy Hill ဟာဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလဲ၊ မင်းဖြတ်လို့မရတဲ့တန့်တွေကိုလုပ်ရမှာပါ။
သင်၏အားလပ်ရက်ကိုအပြည့်အဝစတင်ရန်ဂိမ်း ၄ ခု
သင်၏အားလပ်ရက်များကို Android ဂိမ်းသစ်လေးခုမှတစ်ခုဖြစ်သောစွန့်စားခန်း၊ ပျော်စရာနှင့်နက်နဲသောအရာတို့ကိုမွေ့လျော်ခြင်းဖြင့်အစကောင်းစေပါ